ယူနီကုဒ်အကြောင်း - MYSTERY ZILLION
August 2015 edited August 2015 in Android Development
ဖုန်းတွေမှာ ယူနီကုဒ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့အတွက် အသိပညာလေးများ မျှဝေပေးကြပါ။
sony dual c3
ကို ယူနီကုဒ်နဲ့ အသုံးပြုချင်လို့ပါ.
Hi.bro @စိုင်းခ ,
Unicode font include from Android Version 4.3 and above.No need to do any more.So please install one unicode keyboard and test it.Let me know if you are OK or not.
Here are some Unicode keyboard from Google Play Store.
1 . MUA Keyboard
2 . M3 Keyboard
3 . M Keyboard
android version 5.1.1 တင်လိုက်တာ အခုတော့ အဆင်ပြေသွားပါပြီ/ အမြစ်လဲပေါက်သွားပါပြီ/ အကြံပြု ပြောပြပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။
လောလောဆယ် တွေ့တဲ့ ပြသနာကတော့ ဝဆွဲ ရေးရင် အရှေ့က စာလုံးဆီ ပြေးကပ်သွားတာလေး တော့ တွေ့နေရပါတယ် အဲ့တာကြောင့် ဝဆွဲ ရေးမယ််ဆိုရင်် စပေ့ ခြားပြီး ရေးနေရတတယ်